जापानमा हिउँमा परेर १३ जनाको मृत्यु, २५० जना घाइते
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २८, २०७७, १५:१६
जापानको फुकुइको सडकमा परेको हिउँ। फाइल तस्बिर
टोकियो (जापान)- जापानको समुद्री तटीय क्षेत्रमा भएको बाक्लो हिमपातमा परेर कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको जापानी उद्धारकर्मीहरुले जनाएका छन्। जापानी अग्नि तथा विपद व्यवस्थापन निकायका अनुसार उक्त घटनामा परेर २५० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्।
स्थानीय संचार माध्यमले फुकुई प्रिफेक्चरमा ६० र ८० को आसपास उमेरका तीन व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएका छन्। हिउँसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा यहाँ ४७ जना घाइते भएका छन्।
यस्तै, निगाता प्रिफेक्चरमा पनि हिउँ फाल्नेक्रममा चार जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातले सर्वाधिक प्रभाव परेका तीन वटा प्रिफेक्चरमा मानिसको उद्धार र सहायताका लागि जापानी सेनालाई पनि परिचालन गरिएको छ।
यसबाहेक, हिमपातका कारण सडक यातायात पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। होकुरिकु द्रुतमार्गमा एक हजार २०० भन्दा बढी सवारीसाधन अलपत्र परेका छन्।
जापानको मौसम विभाग (जेएमए)ले प्रशान्त महासागरतर्फको पूर्वी क्षेत्रमा मङ्गलबारसम्म हिमपात हुने जनाएको छ।
किन्की, टोकाई र शिकोकु क्षेत्रमा मंगलबार साँझसम्म पहाडी इलाकामा २० सेन्टिमिटरसम्म हिउँ पर्ने जेएमएले बताएको छ।
फाइनलमा एपिएफसँग आर्मीले खेल्ने, बागमती पराजित
केपी ओलीले कुनै न्यायपूर्ण आन्दोनलको अगुवाइ गर्नुभएको छैन : माधव नेपाल
फाइनलमा एपिएफसँग आर्मीले खेल्ने, बागमती पराजित बिहीबार, माघ १५, २०७७
केपी ओलीले कुनै न्यायपूर्ण आन्दोनलको अगुवाइ गर्नुभएको छैन : माधव नेपाल बिहीबार, माघ १५, २०७७
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चले भन्यो- लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनू बिहीबार, माघ १५, २०७७
उफ्! कहिले सकिन्छ सर्वोच्चमा बहस? बिहीबार, माघ १५, २०७७